Dimoqraadiga oo Guulo ka Gaaray Doorashooyinkii Mareykanka
Xisbiga dimoqraadiga ayaa guulo waaweyn kasoo hooyay doorashadi Talaadadi shalay ka dhacday gobollo ka mid ah dalkaan Mareykanka.
Doorashooyinkaan oo isugu jiray, gudoomiyaha gobolka, golayaasha deegaanka, iyo gudiyada waxbarashada ayaa tii ugu adkeyd ka dhacday gobolka Kentucky oo lagu tartamay xilka guddoomiyaha gobolka.
Gobolkan oo uu si weyn ugu guulestay doorashadii madaxtinimada ee sannadkii 2016-kii madaxweyne Donald Trump, ayaa waxaa kursiga gudoomiyaha ku horreeya Andy Beshear oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga, isaga la la tarmayayay gudoomiyi xilligaan Matt Bevin oo Jamhuuri ah.
Hase ahaatee iyadoo la tiriryey dhammaan codadkii gobolka Jamhuuriga ay ku xooggan yihiin ee Kentucky, ayaa musharaxa Dimuqraaddiga Andy Beshear uu ku horeeyaa codad gaaraya 49.2 boqolkiiba, halka Bevina uu heley 48.8. Beshear ayaa ku dhawaaqay in uu guuleystay, balse Bevin ayaa diiddan in uu qirto in laga adkaaday.
Gobolka Missisippi ayeyse xisbiga Jamhuuriga guul muhiim ah ka keeneen, kaddib markii musharraxii ka socday oo ah gudoomiyaha gobolka Tate Reeves uu doorashada kaga adkaaday ninkii la tartamayay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolkaas Jim Hood, kaasoo ka socday xisbiga dimuqraadiga.
Gobolka Virginiana, Dimuqraaddiyiinta ayaa la wareegay maamulka labada aqal ee sharci dejiyaasha, taas oo ay ugu dambeysay muddo ka badan labaatan sano. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa haatan maamuli doona labada aqal ee baarlamaanka iyo gudoomiyha gobolka Virginia oo ay horey u haysteen.
Doorashooyinka la filayo in la qabto bisha November ee sanadka 2020-ka ayaa fursad u siin doonta codbixiyeyaasha iney doortaan madaxweyne, 35 ka mid ah 100-ka xubnood ee aqalka sare ee senate-ka iyo dhammaan 435 xubnood ee aqalka hoose ee koongareeska.